प्रकाशित मितिः माघ १२, २०७५
१२८६ पटक पढिएको
सिराहा , १२ माघ । गत शनिबार जनकपुरको कुवा रामपुरमा करेन्ट लागेर मृत्यू भएका मृतकहरुको घरमा प्रदेस २ का सरकार पुगेका छन् । शुक्रबार प्रदेस सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जीतेन्द्र सोनल, वन, पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल सहितको टोली सिराहाको बिस्नुपुर गा.पा.४ मा पीडित परिवारको घरमा पुगेर प्रदेस सरकारको तर्फबाट १/१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । मृतक परिबारको घरमै पुगेर सुख दुख साटेका छ्न । घाउमा मलम पट्टि लाउन सिराहा मा मात्र होइन उनिहरु धनुषामा पनि पुगेका थियो । विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण मधेशको दुई होनहार युवक गुमाएको भन्दै मधेश सरकारले उनीहरुको परिवारलाई सानो सहयोग स्वरुप एक एक लाख रुपैयाँ राहतको घोषणा गरेका छ्न । गत शनिबार विद्यतु कार्यालयको लापरवाहीका कारण दुई जनाको ज्यान थियो भने एक जना गम्भिर घाईते भएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ कुवा स्थित धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका मिथिलेश्वर मौवाहीका परमेश्वर मण्डल र सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ थलहाका २६ वर्षिय जगरनाथ साहको घटनास्थलमै करेन्ट लागेर मृत्यू भएको थियो । यता, उक्त घटनामा परी सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका थलहाका सुर्यनारायण ठाकुर घाइते भएका छन् । उनको अवस्था भने अहिले समान्य बन्दै गएको बुझिएको छ । जग्गा निरिक्षण गर्ने क्रममा ज। ९ प ७७०९ नम्बरको मोटरसाईकलको लेगगार्ड ११ हजार भोल्ट करेन्ट प्रवाह भइरहेको अर्थिङ्ग तारमा टाँसेपछि छटपटाई रहेको अवस्थामा जगरनाथ साहले बचाउन खोज्दा उनको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सोकसभालाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जागेस्वर यादबले स्थानीय सरकारको तर्फबाट राहत स्वरुप पचास हजार रकम दिने घोषणा गरे । उनले भने अल्पआयुमै एक होनहार युबा हामी गुमाएका हौ ।